အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Bill Cimino ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Bill Cimino ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
Bill Cimino အဓိပ္ပာယ်ကို
နာမကိုအမှီ Bill Cimino နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Cimino ၏အဓိပ္ပာယ်ကို၏အကျဉ်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဓိပ္ပာယ် Bill ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Bill ။ ပထမအမည်ကို Bill ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Bill ၏ compatibility နဲ့ Cimino
အမညျ၏ compatibility Cimino နာမည် Bill ။
Bill မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
Bill အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
နာမည်အများစုမှာဘုံနှင့်အဆန်းမျိုးရိုးအမည် Bill ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Bill ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Bill ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
Bill ပတျသကျ. အလှနျသေးနုအမည်များ။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Bill စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Bill Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
Bill အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: စေတနာစိတ်နှင့်, ဒေါသ, ရက်ရက်ရောရော, ဖန်တီးမှု, စေ့စေ့နားထောင်. ရယူ Bill နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Bill ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. အတိုပုံစံ William. This spelling was first used in the 19th century. The change in the initial consonant may have been influenced by an earlier Irish pronunciation of the name ရယူ Bill ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
Bill name ကို ပတျသကျ. အလှနျသေးနု: Billie, Billy. ရယူ Bill များအတွက်အမည်ဝှက်.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ Bill: BIL. Bill စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
Bill ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Guglielmo, Guilherme, Guillaume, Guillem, Guillermo, Gwil, Gwilherm, Gwilim, Gwillym, Gwilym, Illiam, Jami, Jelle, Liam, Pim က, Uilleag, Uilleam, Uilliam, Ulick, Vilĉjo, Vilém, Vilhelm, Vilhelmas, Vilhelmi, Vilhelmo, Vilhelms, Vilhjálmur, Vilho, Vili, Viliam, Vilim, Vilis, Viljami, Viljem, Viljo, Vilko, Ville, Villem, Vilmos, Wil, Wilhelm, Wilhelmus, Wilkin, Wilky, Willahelm, Willem, Willi, Willy, Wilmot, Wim, Wiremu, Wöllem, Wullem, Wum. ရယူ Bill အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် Bill: Gates, Freedlander, Paul, Styler, Pflugradt White Ratana. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Bill.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Cimino: Ethan, အန်သိုနီ, Darrell, Bill, Alfred, Alfréd. ရယူ Cimino နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Bill ၏ compatibility နဲ့ Cimino 76 ဖြစ်ပါသည်. ရယူ Bill ၏ compatibility နဲ့ Cimino.
Bill Cimino အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Bill Cimino Billie Cimino Billy Cimino Guglielmo Cimino Guilherme Cimino Guillaume Cimino Guillem Cimino Guillermo Cimino Gwil Cimino Gwilherm Cimino Gwilim Cimino Gwillym Cimino Gwilym Cimino Illiam Cimino Jami Cimino Jelle Cimino Liam Cimino Pim က Cimino Uilleag Cimino Uilleam Cimino Uilliam Cimino Ulick Cimino Vilĉjo Cimino Vilém Cimino Vilhelm Cimino Vilhelmas Cimino Vilhelmi Cimino Vilhelmo Cimino Vilhelms Cimino Vilhjálmur Cimino Vilho Cimino Vili Cimino Viliam Cimino Vilim Cimino Vilis Cimino Viljami Cimino Viljem Cimino Viljo Cimino Vilko Cimino Ville Cimino Villem Cimino Vilmos Cimino Wil Cimino Wilhelm Cimino Wilhelmus Cimino Wilkin Cimino Wilky Cimino Willahelm Cimino Willem Cimino Willi Cimino Willy Cimino Wilmot Cimino Wim Cimino Wiremu Cimino Wöllem Cimino Wullem Cimino Wum Cimino